Pumphead Fekitori - China Pumphead Vagadziri, Vatengesi
Model: YZ35 akateedzana Hunhu ● Zvishandiso zvacho iPSU ine yakagadzika mashandiro uye yakanyanya kupisa tembiricha (150 ° C) ● Resistant acid, soda, asi kwete organic solvent ● Mukati mesimbi simbi inogadzirwa kubva ku304 simbi isina chinhu ● Rollers anoshanda pamusoro akawedzerwa kudzora kukuya kwetubhu, uye nekuvandudza hupenyu hwetubhu technical Parameter Model Muenzaniso uripo Tubing Max kuyerera mwero （ml / min） Yekukurumidza renji （rpm） Roller zvinhu zvekukochekera zvinhu Rollers NO. kuyera ...
Yakadzika Pulsation DMD15
Max kuyerera chiyero: 2070ml / min 1. Yakadzika kupomba, yakakwira-presion 2.Specialized mune yakakwira-chaiyo kupa uye diki kuyerera chiyero kuzadza 3.PPS dzimba, inogona kumira acid, alkali, uye orangic solvent Double phase-compensation ichimanikidza block kuti ideredze iyo pulsation zvinobudirira uye iko kunatsiridzwa kunatsiridzwa technical tafura Model Roller zvinhu chinotenderera nhamba dzimba dzimba mota mota kumhanya yakakodzera tubing max kuyerera chiyero ml / min Kudzokororwa kukanganisa Kurema (kg) DMD15-2A 304 Stainless st ...
Kurumidza Kutakura Pombi Musoro KZ35
Max kuyerera chiyero: 11000ml / min Yakagadzirwa kubva kune isina simbi yakazara indasitiri shandisa Tumira mhando mbiri dzeTubing Retainer modhi: Clamper kana kukodzera. Nhanganyaya KZ35 pombi musoro unogadzirwa kubva ku304 simbi isina simbi zvizere. Iyo yakanyatsogadzirirwa uye kugadzirwa kwemishonga uye yekudyara indasitiri maererano neGMP maitiro. Iyo zvakare ine hunhu hwekuyerera kukuru, kugadzikana uye kuvimbika mashandiro, ngura kuramba, panguva imwechete zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, pombi misoro inogona kuiswa. Unhu ● Gamuchira ...
Kurumidza Kutakura Pombi Musoro KZ25
Max kuyerera rate: 6000ml / min Nhanganyaya Kana pombi musoro KZ25-1A kugadzirisa iyo imwecheteyo Tubing neYZ25-1A, inogona kupa kaviri kuyerera mwero kupfuura YZ25-1A Kupa maviri marudzi eTubing retainer mode: Clamper kana kukodzera. KZ25-1A adopts 304 Stainless simbi rollers uye PC Kudzingwa. Saka inopa kushanda kunoonekwa Iyo PPS yekumisikidza block ine Yekuzvidzora-lubrication kudzora tubing kupfeka. Kugadzikana kwakanaka kwekukura kwakasimba. Yakanaka makemikari kuenderana uye kupisa - kusagadzikana. Hunhu ● Cartridge uye chigadziko chinogona ...
Max kuyerera chiyero: 248ml / min pa150rpm Inoita yakaderera kuyerera yakakwira, chaiyo pombi yakachipa musoro yakajeka chivharo chekutarisa mamiriro ekushanda zviri nyore compact uye exquisite, inogona kuiswa pane yega ndiro kana pani inonyanya kushandiswa kweOEM application Measurements Model Yakakodzera Tubing Max kuyerera chiyero. ml / min mota kumhanya rpm Roller zvinhu Housing zvinhu Roller nhamba JY15-1A 13 #, 14 #, 19 #, 16 #, 25 #, 17 # 248 50150 POM PPS 2/4
max kuyerera chiyero: 2200ml / min Muenzaniso: YZ15 / 25 akateedzana Classical dhizaini Lab shandisa, inokwenenzverwa pombi misoro Hunhu ● Zvishandiso zvacho iPSU ine yakagadzika kuita uye yakanyanya kupisa tembiricha (150 ° C) ● Inodzivirira acid, soda, asi kwete organic solvent. ● Mukati mematanda esimbi akagadzirwa kubva ku304 simbi isina chinhu ● Rollers anoshanda pamusoro akawedzeredzwa kudzikisa kukuya kwetubhu, uye akawedzera hupenyu hweiyo tubing technical Parameter Model Inowanikwa Tubing Max kuyerera mwero （ml / min） ...
DG akateedzana pombi misoro yakagadzirirwa micro kuyerera mwero, akawanda-chiteshi emvura kutamisa uye kugovera yakakwira chaiyo. Nyore kuchinja uye kugadzirisa Tubing. Iyo inokonzeresa uye ratchet vhiri yakagadziridzwa kuve neiri nani basa. Vashandisi vanogona kugadzirisa uye kuchinja tubing nyore. Hunhu ● Kuvharirwa kunogona kugadziridzwa zvishoma negonzo remakonzo kuti rikwane akasiyana matopu emadziro emadziro. ● 6-rollers pombi musoro inopa yakawanda kuyerera mwero. ● 10-rollers inoderedza kupisa uye kuyerera mwero zvishoma. ● Unyanzvi ...
Ichi chigadzirwa parizvino chiri kushandiswa zvakanyanya yechinyakare pombi musoro, ma rollers akagadzirwa nesimbi isina tsvina kana PET-TX, casing inogadzirwa kubva kuPC. Musoro wese wepombi wakajeka uye wakajeka. Zviri nyore kumushandisi kuti aone mashandiro epombi Hunhu ● Crystal yakajeka, yakadzika kupomba ● Kugadzikana mashandiro uye inokwenenzverwa ● Kukwirana saizi parameter Model Availab ...